Gear Fit 2 dị maka ịzụta zuru ụwa ọnụ | Gam akporosis
Onwa June bu nke kachasi na-eme ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụbọchị ọ bụla ma sonyere gyms iji tụfuo kilo ọzọ ma ọ bụ melite ụda anụ ahụ tupu ezumike ahụ eruo. Dị ka nnukwu mgbakwunye na ọpụpụ ndị a, anyị nwere ike ịnweta otu mgbaaka ọrụ ndị ahụ dịka nke Xiaomi na Mi Band 2 kwalitere n'oge na-adịbeghị anya.
Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ mgbaaka ọzọ nwere njirimara ndị ka ukwuu, anyị nwere ike ịhọrọ maka Gear Fit 2 ọhụrụ nke etinyere ire ere n’ụwa taa. Gear Fit 2 dị ugbu a na United States, Canada, Germany, France, Italy, Spain na Australia. ya ọnụahịa bụ dollar 179 ọ na-abakwa n’ibu. Samsung kwuru na ọ ga-adị na mba ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso.
Gear Fit 2, ezigbo enyi gị maka ịgba ọsọ
Anyị ekereworị ozi ọma otu izu gara aga banyere ngosi nke Gear Fit 2, Samsung wearable na oge a abịawo a ọhụrụ imewe na ihe mbụ Gear Fit. Ejiri mara ya site na odidi ergonomic na ihuenyo Super AMOLED nke 1.5-inch. Ọ gụnyekwara ọtụtụ mmelite na-atọ ụtọ dị n'ime dịka nyocha obi na GPS. Ọ bụrụ na GPS bụ ihe dị mkpa, ọ bụ n'ihi na ọ pụtara na Gear Fit 2 anaghịzi adabere na smartphone jikọtara iji nakọta data geolocation, yabụ maka akụkụ ụfọdụ, ọ na-adịgide karịa onwe ya.
A na-ejikwa mgbaaka ọhụụ ọhụrụ site na ndepụta nke arụmọrụ maka ndekọ mmega ahụ anyị nwere akpaka nchọpụta maka omume egwuregwu dị ka ịga ije, ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè, igwe ịkwọ ụgbọ mmiri na igwe elliptical, ebe ọ ga-egosipụta mmemme ndị ọzọ akọwapụtara dịka Pilates, ntinye aka na ịnọdụ ala. Nsonye nke Samsung's S Health ngwa na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta nsogbu ịma aka na ịsọ mpi megide ndị enyi, ebe anyị nwere ike ịkpọ egwu sitere na ọrụ ndị isi iyi dịka Pandora, Google Music, Spotify, Milk Music na Amazon.
Samsung na-ekwusi ike na Gear Fit 2 na-enye a ndụ batrị ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ na iji mmega ahụ eme kwa ụbọchị. Android Kwekọrọ n'Ozizi na gam akporo 4.4 ma ọ bụ smartphones dị elu ma dị na ojii, acha anụnụ anụnụ na pink.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-etinye Gear Fit 2 na ire ere n'ụwa niile